Magacyada 40 Cayaaryahan oo u Tartami doonta abaal Marinta Golden Boy 2018? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Magacyada 40 Cayaaryahan oo u Tartami doonta abaal Marinta Golden Boy 2018?
(01-10-2018) Waxaa lasoo saaray liiska ilaa 40 Cayaaryahan oo u Taratami doonta abaal Marinta sanad laha ah ee loo yaqaan Golden Boy waxaana laga soo xulay Cayaartoyda da.da yar ee Cayaarta kubada cagta.
Aabaal Marintaan oo la bilaabay Sanadkii 2003 dii waxaa difaacanaya oo ku Guuleystey 2017 Cayaaryayanka xulka France iyo Kooxda PSG Kylian Mbappe Xiddigii koobaad ee ku Guuleystana waxa uu ahaa Rafael van der Vaart.
Hadaba waa kuwee 40 ka Cayaaryahan ee la soo saaray Magacyadooda?